IMIBUKO YEZWE LE-MCLAREN VALE SCENIC - I-Airbnb
IMIBUKO YEZWE LE-MCLAREN VALE SCENIC
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Jayne & Colin
U-Jayne & Colin Ungumbungazi ovelele
Yonke indawo yokuhlala entsha iyingxenye yekhaya lethu elakhiwe ngemvelo elihlinzeka ngendawo enokuthula ngempela yokuphumula nokubuka imibono yasemaphandleni. Eduze namabhishi ahamba phambili e-SA kanye nesifunda sewayini sasendaweni esisezingeni lomhlaba. Ukungena okuyimfihlo nokuvikelekile. 24h ukungena kuyatholakala.
I-'360' iyisisekelo esihle kakhulu sokujabulela ukubaleka ngempelasonto noma ukuhlala isikhathi eside uphumule. Ifulethi elisha liklanywe ngokucatshangwayo, linakekelwa ngokucophelela futhi lilungele amazinga anzima.
Ngaphandle Kwe-Decking/Balcony - indawo yokuhlala engaphandle enomthunzi ene-BBQ ukuze ujabulele ukubukwa okuhle phezu komfula oya ezivinini, izingongolo zomnqumo namagquma akude. Uma usuka endaweni ephakeme, umpheme wefulethi uyindawo ekahle yokubuka ukuze ubone insada yezinyoni kanye nesixuku samakhangaru. Futhi kuyindawo ekahle 'yokuphola' ukuphuzela ingilazi yewayini leMcLaren Vale ngenkathi uthatha indawo ebabazekayo noma ujabulela ukushona kwelanga.
Indawo yokuhlala inesitayela sezwe sesimanje. Indawo yokuhlala eyinhloko inekhishi elibekwe kahle elinefriji, i-microwave/convection/grill, i-induction hob, iketela, i-toaster, ikhofi ye-plunger njll. Itafula lokudlela elinefasitela lesithombe elifaka imibono emangalisayo phezu kwesigodi esiya emagqumeni. Kufakiwe amalungiselelo okudla kwakho kwasekuseni - okusanhlamvu, okuthosiwe, ujusi omusha, itiye nekhofi.
Uma uziphumulele ngaphakathi kunosofa wesikhumba kanye ne-TV eyisicaba.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede othokomele olingana nenkosi onelineni eliphambili, indawo enkulu yokugcina indawo kanye ne-TV/DVD combo.Igumbi lokugeza le-en-suite lilula, linamathayela aphelele futhi lesimanje.
Ukushisisa nokupholisa okudonswayo.
I-WiFi ye-ADSL2 eyabiwe yamahhala.
Isitholi sentuthu, ingubo yokucisha umlilo kanye nesicishamlilo.
Indawo yokuhlala inezindawo zokupaka ezinikezelwe ngaphandle ngqo.
Chofoza kukhalenda noma izinsuku zokufaka ukuze uhlole amanani.
Kukhona izilinganiso ezinesaphulelo ezizenzakalelayo ezibekelwe ukuhlala isikhathi eside - hlola amanani eviki noma inyanga.
4.93 · 274 okushiwo abanye
Mayelana nendawo: Indawo yethu yokuhlala izivakashi itholakala kumakhilomitha angama-40 eNingizimu ye-Adelaide enkabeni yeNhlonhlo yeFleurieu. Sikumizuzu embalwa ukusuka emabhishi angcono kakhulu esifunda kanye nogu oluthokozela ukushona kwelanga phezu kwamanzi. Itholakala kahle eMclaren Vale eduze nezindawo zewayini zasendaweni ezingaphezu kuka-70. Iminyango eminingi ye-cellar ingaphakathi kwebanga lokuhamba kalula ukuze ukwazi ukujabulela ukunambitha iwayini ngaphandle kokushayela ngemuva kwalokho. Idolobhana futhi linamakhefi nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu.
Umngcele wethu oseningizimu uhlangana 'Ne-Coast to Vines Rail Trail'. Lena ithrekhi yokuhamba / yomjikelezo emzileni wesitimela ongokomlando oya e-Adelaide ovumela ukufinyelela emabhishi nasemadolobheni endawo.
I-Willunga Farmers Market (Ivulwa njalo ngoMgqibelo, 8am - 12:30pm) bekuyimakethe yokuqala yabalimi esifundazweni futhi isengenye yezihamba phambili. Iqoqa umkhiqizo omuhle kakhulu we-Fleurieu ovela ezweni nasolwandle endaweni eyodwa ephithizelayo. Ama-Artisan aphinde abonise ujamu, izinto ezibhakiwe, oshokoledi noshizi emakethe yamasonto onke.
Ibungazwe ngu-Jayne & Colin
Ababungazi bavame ukutholakala endaweni. Sijabula kakhulu ukuphendula noma imiphi imibuzo noma usizo nganoma yisiphi iseluleko sendawo.
UJayne & Colin Ungumbungazi ovelele